သိရန်အသုံးဝင်အမေရိကန်ဥပဒေများ | USAHello | USAHello
သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျနထေိုငျငှါလာကြသောအခါ, သင်တို့ရှိသမျှသည်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသိကြမည်မဟုတ်. ဥပဒေများအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်! တိုင်းပြည်နယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများရှိပါတယ်, လွန်း. ဤတွင်ဒါကြောင့်သင်အမှားအားဖြင့်ပညတ်ကိုချိုးဖောက်ကြဘူးသိရန်အသုံးဝင်သည်ဟုအချို့သောအမေရိကန်ဥပဒေများဖြစ်ကြောင်း.
သင့်ရဲ့သားသမီးများ၏အသက်အရွယ်ကနေကျောင်းကိုသွားရရှိရမည်6သို့ 16.
သငျသညျ hit မပြုရ, သင်၏သားသမီးလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစား.
သငျသညျအကွောငျးကိုဖတ်နိုင် ကလေးညှင်းပမ်းနှိပ်ဆက်မှု USA တွင်ဥပဒေများ.
ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လုံခြုံလျှင်ဘယ်သူမှလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးလျှင် stoplight အနီရောင်အခါယာဉ်မောင်းလက်ျာဘက်လှည့်နိုင်ပါတယ်, ဖွင့်ဖို့မသင်ပြောပြနေတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်အနီရောင်အလင်းလည်းမရှိမဟုတ်လျှင်.
သင်တစ်ဦးရွေ့လျားကားထဲတွင်တစ်ဦးနဲ့ခါးပတ်ဝတ်ရမယ် (သငျသညျ New Hampshire ပြည်နယ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများမှာမဟုတ်လျှင်).
နှင့်ou အကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် USA တွင်မောင်းဖို့ဘယ်လို.
သငျသညျထိုးစစ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှဝန်ဆောင်မှုငြင်းဆန်စေခြင်းငှါ, သင်မူကား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲများ၏လူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုငြင်းဆန်မပြုစေခြင်းငှါ, လိင်, ဘာသာတရားဒါမှမဟုတ်သူတို့ထဲကနေလာရာအရပ်,.
သငျသညျကာကွယ်ပေးကြောင်း Anti-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဥပဒေများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် လိင်တူချစ်သူလူဦး, trans ဆိုတဲ့လူတွေ, နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သောမိန်းမတို့.
သငျသညျဝငျငှေဝင်ငွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်ရှင်လျှင်, သငျသညျနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခွန်ပြန်လာ file နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှအခွန်ပေးဆောင်ရမယ်. တချို့နေရာတွေမှာ, သင်သည်လည်းပြည်နယ်နှင့်ဒေသန္တရအစိုးရအခွန်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ USA တွင်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ဘယ်လို.
သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခုထက် ပို. လူတစ်ဦးမှလက်ထပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်.
သင်သည်သင်၏ဇနီးသို့မဟုတ်အခြားမိသားစုဝင်များ hit သို့မဟုတ်ရိုက်နှက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်.
မညျသူမြှ, ပင်သင့်မိဘများ, သငျသညျလက်ထပ်ဖို့မလိုချင်ကြပါလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်သင့်အားအတင်းနိုင်ပါတယ်.
သင်တစ်ဦးလူကူးမျဉ်းကြားမှာ မှလွဲ. လမ်းဖြတ်ကူးဘို့အဒဏ်ရိုက်ခံရနိုငျ!
သငျသညျလူထုအရပျ၌အမှိုက်သရိုက်များ drop ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်.
အရက်သောက်ခြင်းနှင့် (တချို့နေရာတွေမှာ) ဆေးလိပ်သောက်လမ်း၌ပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်နေကြသည်.
မစင်ကြယ်သောအမူအကျင့် (အချည်းစည်းရှိခြင်းအပါအဝင်, ဆီး, ပြည်တန်ဆာပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်း) တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်.
သင်တို့တွင်တနှစ်အောက်မည်သူမဆိုမှအရက်ကိုမပေးရပါမည် 21 သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရက်ကိုမသောက်ကြကုန်အံ့. (မိဘများအတွက်အချို့ပြည်နယ်များအတွက်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်, သူတို့၏သားတို့သည်မိမိတို့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သောက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။)
မူးယစ်ဆေးဝါးများယူသို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရောင်းချရန်သို့မဟုတ်များကိုတရားမဝင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် (အရာဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည် “ထိန်းချုပ်ထားသောတ္ထုများ” ပညတ္တိကျမ်း၌အ).
အများဆုံးပြည်နယ်များရှိ, တိရစ္ဆာန်တွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်. ဤသည် overworking ဆိုလိုတယ်, ဂရုမစိုက်, ငတ်, တိရိစ္ဆာန်များနှိပ်စက်သို့မဟုတ်ရိုက်နှက်. သင်လုပ်နိုင်သည် ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ပါ, အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်း ခန့် USA တွင်တိရိစ္ဆာန်နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို.
တချို့ကတိုက်ပွဲများဟုခေါ်သည် “မတရားစွာကျင့်ကြံပြုမူ” သို့မဟုတ် “နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရေး။” အခြားအတိုက်ခိုက်နေသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် “ချေမှုန်းရေး။” တောင်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးချေမှုန်းရေးနိုင်ပါတယ်ခြိမ်းခြောက်, လေးနက်ရာဇဝတ်မှုအရာဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျ၏အသက်အရွယ်အကြားအထီးဖြစ်လျှင် 18 နှင့် 26 နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတှငျနထေိုငျ, လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအတွက်ရွေးချယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်.
သင်တစ်ဦးနေထိုင်သူသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူမဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်နှင့်သင်၏နေထိုင်သူ status ကိုသက်သေပြသယ်ရမယ် (သင့်ရဲ့စာတမ်းများသို့မဟုတ်သင့်အစိမ်းရောင်ကဒ်).
America မှာအများအပြားဥပဒေများရှိပါတယ်, သင်မူကားလည်းအများအပြားအခွင့်အရေးရှိသည်! နေထိုင်သူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်များကိုသုံးပါ.
Pramila Jayapal ကွန်ဂရက်အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်တိုက်
တန်းတူအခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်. Read
အကောင်းဆုံးလူသိများ U.S အချို့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ. ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ